Adobe Photoshop Express waxaa lagu cusbooneysiiyay 2 astaamood oo cusub | Abuurista khadka tooska ah
Adobe Photoshop Express ayaa loo cusbooneysiiyay qalabka mobilada iyada oo taxane ah oo horumarin ah taas oo ay mudan tahay in la muujiyo ikhtiyaarka hadda si loo awoodo in wax laga beddelo cabbirka astaanta-biyaha. Tani waxay umuuqan kartaa faahfaahin yar, markaad lashaqeyneyso sawirro aan ku qasban nahay inaan u soo dhigno baloog ama shabakadda, waxay noqon kartaa muhiimad weyn.
Waana tii hore fursadaha habayn ayaa aad u caato ahayd in ku dhow in laga noqdo qaybta ugu weyn ee barnaamijkan naqshadeynta weyn. Kaliya maahan in la hagaajiyay ikhtiyaariyada u-qoondeynta watermark, laakiin waxaa jira fursado badan.
Inkasta oo qaabeynta astaamaha ee Photoshop Express aysan ahayn mid gebi ahaanba hagaagsan, sida ay noqon laheyd haddii aan ku dhejin karno astaanta halka aan rabno, haa hadda waan qiyaasi karnaa. Muuqaal ay dalbadeen bulshada iyo in Adobe dhageystay si loogu keeno cusbooneysiintan cusub.
Riwaayad kale ayaa ah la hagaajiyay «Vignette» si sawirradeenna loo siiyo saameyn xun oo weyn oo leh qalin sax ah iyo xakameyn wareega. Waxyaabaha cusub sidoo kale waxaa lagu soo daray qaabab badan oo qoraal ah oo lagu soo daray barnaamijka Adobe iOS iyo Android oo aan ka ogaanay Photoshop Express.
Marka kuwani waa faahfaahin yar oo cusub oo soo kordhinaysa khibrad fiican laga bilaabo waxa noqon lahaa moobil ama kiniin Nidaamyadaas hawlgalka ee baahsan iyo in labadooduba ay soo ururiyaan malaayiin dad ah oo isticmaalaya aaladooda.
Nooca Photoshop Express oo leh warkaan waa 5.9.571. Wixii Android waad awoodaa soo mar xiriirkan si aad u soo dejiso APK oo markaa aad uga tagto sugitaanka inaad awood u yeelan karto inaad wax ka beddesho cabbirka calaamadda sawirradaada.
Kuwa idinka mid ah ee adeegsada nooca ugu weyn ha moogaan casharkaan si aad ugu beddesho qaababka burushka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Hadda waxaad ka beddeli kartaa cabbirka calaamadda ku taal Adobe Photoshop Express